एक वर्षमा भएका कामबाट म सन्तुष्ट छु : प्रमुख,बाग्लुङ नगरपालिका - TV Annapurna
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुरा भयोे । करिब दुई दशकदेखि कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पायो । चुनावका बेला बाँडिएका आश्वासन र देखाइएका सपना, कति सपनामै सिमित छन् त कति कार्यान्वयनको क्रममा छन् । कतै कर्मचारी अभाव त कतै नीति, नियम अभावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन् । एकातर्फ लामो समयपछि भएको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिमाथि जनता अपेक्षाको चाङ ठुलो । अर्कोतर्फ लामो समय कर्मचारीको मनोमानीमा चलेका स्थानीय निकायलाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने बनाउनुपर्ने चुनौती । यस्तो अवस्थामा बाग्लुङ नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एक वर्षको अवधिमा के के काम गरे ? के हुँदै छ ? र आगामी योजना के छन् ? यी र यस्तै विषयमा टिभी अन्नपूर्णकर्मी विनोद देवकोटाले बाग्लुङ नगरपालिका प्रमुख जनकराज पौडेलसँग गरेको कुराकानी:
निर्वाचनको बेला तपाइले जनताका बीचमा बाँडेका आश्वासन गरेको प्रतिबद्धता कसरी पुरा गदैं हुनुहुन्छ ?
हामी निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष पुरा भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा भएको लामो समयको जनप्रतिनिधि बिहिनताको अवस्था अन्त्य भएको छ । यो सँगै हामीले चुनावको समयमा मात्रै होइन हरेक पटक जनताको घरदैलोमा पुग्दा विभिन्न खाले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ । यी प्रतिबद्धता पुरा गर्न हामी तल्लीन छौँ । लामो समयपछि चुनिएको नेतृत्वप्रति स्वाभाविक रूपले जनताका ठुला अपेक्षा छन् । हामीले पनि यस्ता अपेक्षा पुरा गर्ने आशा देखाएको हो । अहिले यसकै लागी हामी लागी परेका छौँ । यो एक वर्षको अवधिमा हामीले जति पनि काम गर्न सकेका छौ, म व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्ट छु ।
बीस वर्षदेखि कर्मचारीले हाँकेका स्थानीय निकाय, तपाइहरू एकैपटक नेतृत्व लिएर आउँदा काम गर्न कत्तिको सजिलो भइरहेको छ ?
यसमा मेरो फरक धारणा छ, अहिले चलिरहेको जुन कर्मचारी संयन्त्रको बनोट छ यो पूर्णतः गलत छ । यसलाई आधार मानेर गयौँ भने हामीले चाहेजति काम गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्न म हिच्किचाउनु हुँदैन । हामी बीस वर्षको कामलाई पाँच वर्षमा देखाउन चाहन्छौँ । जुन हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो । विडम्बना अहिलेका कर्मचारी संयन्त्र एक खालको जंजीरबाट निस्कन नखोज्ने खालको छ । कतिपय अवस्थामा हामीलाई पनि प्रक्रियाको कुरा अघि सारेर अल्झाने काम हुन्छ । हो प्रक्रिया पुरा गर्न कुरामा हाम्रो दुईमत रहेन तर प्रक्रिया छिटो छरितो पुरा गर्ने र काम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ रहँदा कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ । यद्यपि अहिलेसम्मको अवस्थाले हामीलाई निराश बनाउने अवस्था छैन । तैपनि मेरो भनाई हामीले निक्कै छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकेनौँ भने जनताले छुट दिने छैनन् भनेर एउटा छुट्टै आठ दश जनाको टिम बनाएर योजना बनाएरै धेरै भन्दा धेरै सुधारका काम गर्ने सोचिरहेको छु ।
तपाईको भनाईमा एउटा छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र बनाउने भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, राजनीतिक संयन्त्र मात्रै होइन, एउटा ब्युरोक्रेसीको टिम, जहाँ विभिन्न विज्ञहरू जस्तै प्रसासनिक विज्ञ लगायतका विभिन्न बिषयगत विज्ञको टोली बनाएर जाने, त्यसलाई जागिर ख्वाएर राख्ने होइन, हामी गएपछि सँगै त्यो टोलीको म्याद पनि सकिन्छ । यो हिसाबले काम गर्ने योजना बनाएका छौ । यसमा मैले संवैधानिक पक्षदेखि लिएर अन्य सम्बन्धित निकायमा कुरा उठाएको छु । यसको एउटा अन्र्तराष्टिय अभ्यास पनि छ । नयाँ निर्वाचित भएर आएपछि नयाँ टिम बनाउने जसले काम गर्न सहज होस् र निर्वाचित पदाधिकारीको समय सकिँदा उनिहरु पनि स्वंत बिदा हुनेछन । यस्तो अभ्यास हामी कहाँ पनि हुनु पर्छ ।
यसको अर्थ अहिले कर्मचारी अभाव र नीतिगत अभाव नगरपालिकाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको हो ?
एकदमै, एउटा त कर्मचारीको प्रयाप्त सङ्ख्या नै छैन, भएकाको पनि दृष्टिकोण र जगडिएको कर्मचारी तन्त्र छ । जसले पहिलो त्यही चंगोलबाट बाहिर निस्कनै चाहँदैन, अर्को तर्फ निस्कने सिमित कर्मचारीलाई साथमा लिएर जान पनि नीति, नियम र कानुनको अभाव छ । यहि कारण अपेक्षित काम अपेक्षित समयमा गर्न नसकिएकै हो । जेहोस यहि अप्ठ्यारोकाबीच पनि अघि पनि भने एक वर्षको अवधिमा भएका काम सन्तोषजनक छन् ।
जनताको चासो बढी विकासमा हुन्छ, त्यो पनि देखिने गरी, निर्वाचित भएको एक वर्षकोे अवधिमा विकासका काम केके भयो ?
एउटा त बसपार्कको अभाव थियो, जुन हामीले नगर विकास कोषसँग सम्झौता गरेर बनाउने कामलाई अघि बढाइसक्यौँ । बजारको अव्यवस्थालाई धेरै न्युनिकरण गरिसकेका छौ । पर्यटन भित्र्याउन चिडियाखाना बनाउने कामको पनि डिपीआर तयार भैसकेको छ । हामीले निर्वाचनताका २६ वर्षदेखि बन्द बलेवा विमानस्थल सञ्चालन गर्नेछौँ भनेका थियौँ । नगरपालिकाले ठुलै जोखिम उठाएर पनि बाग्लुङ नगरपालिका मात्रै होइन समग्र धौलागिरीको गर्व बलेवा विमानस्थल सञ्चालनपछि बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दीसम्मको समृद्धिको ढोका खोल्ने अपेक्षासहित पुर्नसञ्चालन गरेका छौ । नगरपालिकाभित्रका बाटा घाटाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाएका छौ । नगर बस सञ्चालनका लागि ठुलो मात्रामा बाटो निर्माणको काम भइरहेको छ । लामो समयदेखि बाग्लुङ बजारमा व्याप्त खानेपानीको ठुलो समस्या अब करिब करिब अन्त्य हुदैंछ । यो लगायत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि थुप्रै काम भएका छन् ।
जनताको गुनासो चाँसो सानो सानो कुरामा हुन्छ, जस्तो कि घर अगाडिको बाटो बनोस्, खानेपानी सहज रूपमा मिलोस् यातायात, स्वास्थ्य शिक्षासँगै सामाजिक सुरक्षाको सवालमा आमचासो स्थानीय तहमा बढि हुने गरेको छ ।
स्थानीय तहलाई सबैजसो अधिकार दिएको अवस्थामा तपाई कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
त्यो पनि भएको छ, यो एक वर्षमा हामीले झन्डै एक करोड बढी बजेट खर्चेर ग्रामीण क्षेत्रका सबैजसो सडकहरूलाई सुधार गरेका छौ । सर्भिस डेलिभरीको क्षेत्रमा पनि एक दिनको काम उहि दिनमै दिने योजनामा काम भइरहेको छ । एक कक्षादेख तीन कक्षासम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन सुरु भएको छ । नगरको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न सुरक्षा निकायसँथ नियमित छलफल गर्ने तथा सचेत गराउने काम भइरहेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि कहीँ कतै सामान्य त्रुटि कमी कमजोरी रहन्छन्, हामीले नेतृत्व लिएको एक वर्ष भएको छ अझै बाँकी समयमा यी त्रुटि कमजोरीलाई पनि हटाएर जानुपर्छ भन्नेमा म सचेत छु ।
बलेवा विमानस्थल करिब २६ वर्षपछि सञ्चालनमा आयो, स्थानीयमा निकै ठुलो उमङ्ग पनि छाएको छ । यद्यपि यसको दीर्घकालीन सञ्चालनको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् नी ?
हो बलेवा विमानस्थल सञ्चालनले नगरपालिकामात्रै होइन छिमेकी जिल्ला म्याग्दी र पर्वतमा समेत आशा पलाएको छ । तर २६ वर्षपछि सुरु भएको विमानस्थलको दीर्घकालीन सञ्चालनका विषयमा आम जनमानसमा चासो हुनु स्वाभाविक हो । लामो समयदेखि बलेवा विमानस्थल गौचरनका रूपमा रह«ो राज्यको तत्कालीन नेतृत्व र सरोकारवालाको बेवास्ताले बलेवामात्रै होइन धेरै विमानस्थल अहिलेपनि गौचरणकै रूपमा छन् । मैले निर्वाचन पहिलेपनि यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका थियो । निर्वाचित भएपछि मैले यसलाई केही जोखिम मोलेरै भए पनि सञ्चालनको लागी पहल गरे । अहिले सञ्चालनमा छ । भाडादर महँगो भयो भन्ने गुनासो आयो तत्काल म आफै सम्बन्धित निकायमा पुगेर पुनरावलोकनका लागी दबाब दिएपछि अहिले भाडा घटेको छ । अझैपनि केही व्यवस्थापकीय समस्याले आशङ्का उव्जनु स्वाभाविक हो । तर विमानस्थल बन्द हुन अब कुनै पनि हालतमा दिनुहुँदैन । हाम्रो निरन्तर यसका लागी पहल जारी रहनेछ । यसमा स्थानीय जनता र माननीयज्यूहरुको पनि सपोर्ट छ र जारी रहेन विश्वास छ ।
पौडेलसँग गरिएको कुराकानी भिडियो तलको लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ :
सुनकाण्डका फरार एसएसपी खत्रीसहित ७ जनाविरुद्ध इन्टरपोलमा रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने तयारी
आमाको कुटाइबाट छोरीको मृत्यु, आमा प्रहरी खोरमा